Boeing nageenya caalaa bu'aaf dursa kennuusaaf himatame - BBC News Afaan Oromoo
Boeing nageenya caalaa bu'aaf dursa kennuusaaf himatame
Seera baastonni US kampaaniin xiyaara omishu Boeing "irra deddebiyuudhaan qulqullina omisha isaa dhoksuudhaan" himatan. Kun kan ta'es, yeroo xiyaara 737 Max 8 akka mirkaneeffannaa ga'umsaatiif gaafatetti kan ta'e ture.
Himannaan Boeing irratti seera baastota kanaan kan dhiyaates, wayita Hoji-gaggeessaan dhaabbatichaa Deniis Mu'ileenberg Koree bakka bu'oota ummataa dhimmi ilaallatu duratti dhiyaatee gaafatamutti ture.
Miseensonni bakka bu'oota ummataa Ameerikaas akka jedhanitti Boeing nageenyaaf osoo hin taane bu'aa isaatiif dursa kennuuf jecha osoo qulqullinaafi ga'umsa omisha isaa hin mirkaneeffatiin hojiitti bobbaasuuf fiiguun guddaa isaan yaaddesseera.
Hogganaan Boeing maatii namoota du’anii ifatti dhiifama gaafatan
Balaan kufee caccabuu xiyaaraa 737 Max 8 kanaan dura uumamee walumaa galatti namoota 346 galaafateera.
Obbo Mu'ileenberg dhaabbanni isaanii kun "dogogora" hojjeteera.
"Balaawwan lamaan nu mudatanirraa barannee jijjiiramawwan barbaachisan adda baafanneerra," jedhan.
Bara darbe Onkoloolessa keessa Boeing 737 Max kan Daandii Xiyyaaraa Laayoon ta'e caccabee namoonni 189 keessa turan hunduu dhumaniiru.
Ji'a shanii booda ammoo Boeing 737 Max qabeenyummaan isaa Daandii Xiyaara Itoophiyaa ta'e kufee caccabuudhaan namoonni 157 keessa turan hunduu dhumaniiru.
Seera baastonni Boeing rakkoo sirna to'annoo 737 Max 8 keessa jiru kan MCAS jedhamu osooma beekuu dhiisuudhaan rakkoon kun akka uumamu gochuu isaatiin himatan.
Balaa xiyaarota caccabaniif ka'umsa kan ta'e ammoo rakkoo sirna to'annoo sana keessa turedha.
Miuseensota maatii warra balaa Boeing 737 Max lubbuun darbee
Maatiin namoota balaa xiyaaraa kanaan dhumanii hedduun isaanii himannaa kanarratti argamanii dhaggeeffataniiru. Maatiin kunneenis, haalli Obbo Mu'ileenbeerg kan baayyee nama madeessu waan ta'eef aangoo isa gadi dhiisuu qaba.
"Ani osoo asiifi achi hin qabiin lubbuu namootaa 346 sababii balaawwan tureen dhumaniif itti gaafatamummaa nan fudhadha jechuu qaban. Sababiin isaa balaan kun kan hambisuun danda'amudha ture," jedhan Paawul Nijoroogee.
Paawul Nijoroogeen balaa Daandii Xiyyaaraa qaqqabeen miseensota maatii isaa keessaa namoota shan dhabeera.
Adnaan Stumoo ammaa nama obboleettiin isaa Samyaa jedhamtu balaa Daandii Xiyyaara Itoophiyaan jalaa duute yoo ta'an Obbo Mu'ileenberg aangoo gadi dhiisuun hidhamuu qaba jedhan.
Hogganaan Boeing maatii namoota du’anii, imaltoota ifatti dhiifama gaafatan
Daandii Xiyyaara Itoophiyaa: 'Paayileetonni hundi leenjii barbaachisu fudhataniiru'
Qulqulleessituun hoogganaasheef yaadannoo barreessitee hojii gadhiiste deggarsa guddaa argatte